धूलो र धुँवाबाट अनुहार तथा छालालार्इ कसरी बचाउन सकिन्छ ? – Everest Dainik
धूलो र धुँवाबाट अनुहार तथा छालालार्इ कसरी बचाउन सकिन्छ ?
आजभोलि बाहिरी वातावरण यति धेरै प्रदूषित हुँदै गइरहेको छ कि जसका कारण हाम्रो स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पारिरहेका छन् । अर्कातिर कामको व्यस्तताका कारण पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो स्याहार सुसार गर्न पाइराखेका हुँदैनन् । जसले गर्दा हाम्रो छालामा धेरै समस्याहरु देखिरहेका छन् । घरायसी कामसँगै कार्यालयको काम पनि सम्हाल्नुपर्ने भएको युवती तथा महिलाहरु विशेष दिनजस्तै (चाडबाड, विवाह पार्टी, व्रतवन्ध आदि) अवसरका बेलामा पार्लर गएर अथवा घरैमा बसी छाला राम्रो बनाउने गर्दछन् । यसका लागि घरमै, भान्सामै उपलब्ध हुने चीजबाट दैनिक स्याहार गर्न सकियो भने पार्लर गएर धेरै रकम खर्च गरिरहनुपर्दैन । फेस्टिभ मुडमा फेसियल गराउने हो भने गोल्ड फेसियल उपयुक्त हुन्छ । गोल्ड फेसियलले अनुहारमा चमक ल्याउँछ । यो फेसियल २५ वर्षको उमेरपछि गराउन सकिन्छ ।
छाला चार प्रकारको हुन्छ । सामान्य, सुख्खा, तैलीय तथा मिश्रति । यीमध्ये आफ्नो कुन प्रकारको छाला हो पत्ता लगाउनुपर्छ ।
छाला सामान्य छ भने गाईको दूधमा एक चिम्टी बेसार हालेर कटनको सहायताले सर्कल मसाज गरी अनुहार क्लिन्जिङ गर्ने । त्यसपछि बदाम मिक्स भएको क्रिम लगाउने । पाउरोटीको बीचको भाग, अण्डाको पहेंलो भाग, पाउडर दूध तथा एक चिम्टी बेसार मिसाएर पेस्ट बनाउने । यो पेस्ट आरामदायक कुर्सीमा बसेर लगाउनुपर्छ, अनुहार झुकाउनु हँदैन । यो प्याक हप्ताको एकपटक लगाउन सकिन्छ । सामान्य छालामा फेसियल गर्नु जरुरी हुँदैन ।
ओखर र आलमन्डलाई दूधमा भिजाएर पेस्ट बनाई त्यसको आइसक्युब तयार गर्ने । कटन भित्र आइस्क्युव हालेर दिनहुँ सर्कल मसाज गर्ने । यो उपाय दिनहुँ अवलम्बन गर्नुपर्छ । हप्ताको एकपटक अण्डाको पहेंलो भागमा मह मिसाएर प्याक लगाउने । १० मिनेटपछि चिसो पानीले अनुहार धोएर सर्कल मुडमा मोस्चराइजर लगाउने ।
कटनको सहायताले दिनहुँ तीनपटक टोनरले अनुहार पुछ्ने । फ्रेस एलोबेरा जेल वा सुन्तलाको रस लगाउने । अंगुर, मसरुमको रस, गोलभेंडाको रसामध्ये कुनै पनि फलफूलको रस अनुहारमा लगाउन सकिन्छ । चन्दन र गुलाब जल मिसाएर पेस्ट लगाउने ।
राति सुत्ने बेलामा चिसो पानीले अनुहार धोएर सुत्ने र बिहान उठ्नेबित्तिकै कुन ठाउँ तैलीय र कुन ठाउँ सुख्खा छ ऐना हेरेर प्याक र क्रिम लगाउन सकिन्छ । एजेन्सीको सहयोगबाट
ट्याग्स: skin care